Fiainana taorian’i Manus: Resaka tamin’i Eaten Fish, Iraniana mpanao tantara an-tsary momba ny fiainana anatiny sy ivelan’ny toby fihazonan’i Aostralia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Novambra 2018 15:29 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Deutsch, Português, Español, русский, Français, Ελληνικά, عربي, 日本語, English
Sariitatr'i Eaten Fish, nosoritana raha mbola nohazonina tao amin'ny nisy Manus izy. Loharano: Facebook. Nahazoana alalana
21 taona i Ali Dorani raha tonga tamin'ny alalan'ny sambon'ny mpitady fialokalofana tao amin'ny nosy krismasy, tamin'ny Jolay 2013. Enimbolana taty aoriana izy nafindra tao amin'ny nosy Manus, toby fihazonana ivelan'ny sisintanin'i Aostralia ao Papua New Guinea, izay nandiavany ny efa-taona manaraka tamin'ny fiainany.
Nanomboka nanoritsoritra sariitatra izy tao Manus mba hizakany ny Obsessive Compulsive Disorder (OCD na fikorontanan-tsaina mora mitroatra) raha nandrakitra ny toe-draharaha mahazo azy sy ireo mpitady fialokalofana hafa tao amin'ny toby. Nandray ny anaram-penina ‘Eaten Fish’ izy izay manondro ny nanavotana azy tamin'ny ranomasina tamin'ny taona 2013. “
Nanomboka navoakan'ny fampitam-baovao ireo sariitatra manoritsoritra ny fiainana maha-mpialokaloka tao Manus raha efa nanakaiky ny fahatelo taona nihazonana azy. Ny sasany mitaratra ny fiharatsian'ny fahasalamany sy ny fanararaotana ara-nofo nozakainy tao amin'ny toby.
Tamin'ny taona 2016, nanolotra lokam-pikirizana tamin'ny fanoritsoritana sariitatra ho azy ny Cartoonists Rights Network International [tambajotra iraisampirenen'ny zon'ny mpanao sariitatra. Toy izao ny fivakin'ny loka azony: “Ho ankatoavina ho lehibe ny sariitatra nataony indray andro any, tantara mahasehaka ny erantany amin'ny fihetsik'olombelona ratsy indrindra hatramin'ny toby famondronan'ny ady lehibe faharoa.”
Voatsikera fatratra amin'ny zava-misy ao amin'ny tobin'i Manus i Aostralia. Nambaran'ny Firenena Mikambana ho “fanasaziana lian-drà, tsy manaja sy manimbazimba ny mahaolombelona” ny politikan'ny firenena amin'ny fihazonana tsy misy fetra ao amin'ny toby ivelan-tsisintany.
Navotsotra i Ali tamin'ny Desambra 2017 taorian'ny fanentanana manerantany miantso ny fanafahana azy. Tonga tao Stavanger, Norvezy izy tamin'ny 17 Desambra tamin'ny alalan'ny fanohanana vatsin'ny International Cities of Refuge Network.
Tamin'ny alalan'ny imailaka izahay no niantsafa an'i Ali herintaona latsaka kely taoriany nandaozany an'i Manus, zavatra izay soritsoritan'i Ali ho “mampientanentana mankany amin'ny fahafahana”. Nilaza ny fiainany taorian'ny nihazonana azy izy, ny zava-niainany tao amin'ny tobin'ny mpialokaloka, ary ny toroheviny ho an'ireo artista hafa mizaka fanenjehana.
Raha nilaza i Ali fa sambatra ao amin'ny fiainany vaovao ao Norvezy, dia mbola manana fahasarotana izy amin'ny fanitsiana (ny tenany):
Tratran'ny fahaketrahana lalina aho roa herinandro taoriana, ary mbola mafy noho izay nozakaiky tao amin'ny nosy Manus izany karazana fahakiviana izany, ary naharitra efatra na dimy volana izany mandra-paha-tsaratsara ahy kokoa, noho ny fanampian'ny psikology sy ny namana sasantsasany ary nanomboka nifandray tamin'olona maro ary nanangana fiainam-baovao.
Nahatsiaro ny fanapahan-keviny hanoritsotra sariitatra izy faha nanolo-kevitra azy hirotsaka hanao asa mba hizakany ny OCD ao aminy ny mpiadidy ara-pahasalamàna iray, eny fa na dia tsy mora aza izany — ao anatin'ny zavatra maro dia tsy omena penina sy taratasy ny voahazona.
Nitozo tamin'ny fanoritsoritan-tsary hatrany aho mandra-pifindrako tao amin'ny nosy Manus tamin'ny taona 2014, ary tsy ampy ny taratasy, tsy ampy ny pensilihazo ary tsy maintsy nangala-taratasy tamin'ny mpiasa aho, tsy maintsy nitady sombin-taratasy aho hosoritsoritana, ary roa taona sy tapany vao afaka namoaka taty ivelany ny sary nataoko aho. Ary izay ihany ny antony tokana mbola nahavelona ahy. Tsy nanampy ahy ho salama amin'ny fahavoazako ara-tsaina ny zavakanto, saingy nanampy ahy handefa ny feoko ho any amin'ny olona any amin'ny tontolo ivelany. Ny zavakanto no nanavotra ahy, ny zavakanto no nanavotra ny fiainako.
Nahasintona ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ireo ekipan'ny fifidramonina tao amin'ny nosy Krismasy voalohany ny soritsoritra nataony, ary avy eo tao amin'ny nosy Manus. Taoriana, tsikaritry ny fampitam-baovao Aostraliana ny zavakantony, izay nahafantarana ny zava-manjo azy tao Manus:
Tsy manao tantara an-tsary politika aloha izaho voalohany, ka dia nanomboka tamin'ny fandraketana ny fiainako sy ny tolona natrehako aho, ary tsy fantatro izay zava-nitranga, indray andro aho nisokatra ny masoko ary navoaka tamin'ny gazety isan-karazany aho ary hita tamin'ny vaovao, olona maro no nahafantatra ahy tao Aostralia, ary nahabe fanantenana ahy hitozo ho velona izany, ary tsy nanan-kevitra aho fa ny kisoritsoritra nataoko no nanafaka ahy indray andro any.
Sarin'i Ali Dorani mampianatra manoritsoritra ao Norvezy. Loharano: Facebook. Nahazoana alalana
Izao no fampahatsiarovan'i Ali ho an'ireo artista mbola mitolona, indrindra fa ireo tanora artista miatrika fanenjehana:
Aza mijanona, aza mitsahatra amin'ny zavatra ataonao. Mandokoa hatrany, manoritsorita hatrany, alefaso hatrany ny feonao. Mandany fotoana, sarotra saingy mahomby, nahomby tamiko. Aza leo.
Niantso vonjy aho nandritra ny dimy taona ary dia nahazo. Azoko ny fahafahako rehefa nangataka nandritra ny taona maro tamin'olona isan-karazany. Tsy mahamenatra ny mangataka (manontany). Tsy mahamenatra ny mangata-bonjy.
Nandrisika vondrona maro ihany koa izy hanavotra ireo mpialokalok'i Manus hitsipaka ny fizarana vaovao diso momba ny toe-draharaha ao amin'ny toby. “Nanavotra ahy ny marina. Nanampy ahy hamerina ny fahafahako ny marina. Mandany fotoana be saingy nety.”
24 ora izayAostralia